Mongolia, fizahantany hafahafa | Vaovao momba ny dia
Mongolia, fizahan-tany vahiny
Mariela Carril | | Inona no ho hita, Fitsangatsanganana any Azia
Jereo ny sarintany ary tadiavo Mongolia eo. Aza afangaro amin'ny faritany sinoa, fa eo izy io, akaiky dia akaiky. I Mongolia dia firenena voahodina amoron-tany fa misy mpiara-monina matanjaka be toa an'i Chine sy Russia.
Efa nandre momba an'i Genghis Khan ve ianao? Mongoliana izy ary izy no mpitarika fanjakana lehibe iray lehibe. Raha ny marina dia nanana amperora Mongol i Sina. Somary mitabataba ihany ny tantarany politika saingy nanomboka tamin'ny 20 tamin'ny taonjato lasa firenena mahaleo tena izy ary raha mitady ianao toeran-kafa… Ahoana ny hevitrao momba izany?
2 Ahoana no ahatongavana any Mongolia
3 Inona no ho hita any Mongolia
Firenena midadasika izy io nefa miaraka amin'izay dia vitsy ny mponina ao aminy kilometatra toradroa ny velarany. Na ankehitriny aza dia maro amin'izy ireo no mpifindrafindra monina sy mpifindrafindra monina ary na dia ao amin'ny foko Mongoliana aza ny maro an'isa dia misy foko vitsy an'isa koa.
Ny landscapes dia anjakan'ny Tany efitra sy ala ahitra ary ahitra i Gobi. Malaza ny soavaliny, miaraka amin'izy ireo i Genghis Khan no nanangana ny fanjakany ary iray amin'ireo zafikeliny nanangana ny Dinam-panjakan'i Yuan tany Sina izay noresahin'i Marco Polo tao amin'ny tantaram-pitoriany.
Ny Mongol dia niady nandritra ny fotoana ela tamin'ny Manchu, iray amin'ireo vahoaka tonga nifehy ny empira sinoa, hatramin'ny farany dia nizara ho repoblika mahaleo tena sy faritany sinoa antsoina ankehitriny ao anaty Mongolia ankehitriny ny faritany.
Ny renivohiny dia Ulaanbaatar, tanàna mangatsiaka raha misy rehefa ririnina. Afaka manao -45 ºC izy ireo! Mazava ho azy fa tsy mandeha amin'ny ririnina raha tsy te hiaina ny zavatra tsy maintsy niainan'ny gadra Stalin tamin'ny sesitany an-tsokosoko ... Ny toekarena Mongolia dia mifototra amin'ny harena voajanahary, arina, solika ary varahina amin'ny ankapobeny.
Ahoana no ahatongavana any Mongolia
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Genghis Khan dia eo amin'ny 18 kilometatra atsimo andrefan'ny Ulaanbaatar. Korean Air, Air China, Mongolian Airlines, Aeroflot na Tiorka mitazona sidina mahazatra, ankoatry ny orinasa hafa, noho izany Azonao atao ny tonga amin'ny sidina mivantana avy any Alemana, Japon, Hong Kong, Torkia, Rosia ary Sina ary misy fifandraisana avy amin'izao tontolo izao.
Raha adventurous koa ianao ao ny fiaran-dalamby Trans-Siberia malaza, lava indrindra eto an-tany. Avy any Beijing ka hatrany Saint Petersburg dia efa ho valo arivo kilaometatra ary ny sampana Trans Mongol izay miainga avy amin'ny sisintanin'i Rosiana hatrany Ulaanbaatar ka hatrany amin'ny sisintanin'ny Sinoa. Dia inona! 1.100 kilometatra ny totaliny ao anatin'ny Mongolia. Ny fanaovana ny dia amin'ity lamasinina ity dia traikefa lehibe amin'ny tenany, mihoatra ny toerana itodiana. Tahaka ny dia mankany Ithaca izany.
Betsaka no misafidy ny handray ny fitsidihana an'i Moskoa - Ulaanbaatar - Beijing. Dimy andro eo anelanelan'ny Moskoa sy Ulaanbaatar ary avy any Beijing ka hatrany Ulaanbaatar dia 36 ora. Ny kalesy tsirairay dia misy vata sivy misy farafara efatra ary hahazo vola kely kokoa dia mahazo vata kambana roa ianao. Ny tapakila dia vidiana amin'ny Internet amin'ny tranokala www.eticket-ubtz.mn/mn ary tsy maintsy vidiana iray volana mialoha.
fa rahoviana ianao no tokony handeha ho any Mongolia? Araka ny efa nolazainay tena henjana ny ririnina. Mavesatra ny andro eto nefa ny masoandro mamiratra hatrany ary tsara be izany. Mahazo tara-masoandro maherin'ny 200 andro i Mongolia ka ny lanitra dia mijanona ho manga hatrany amin'ny taona mandavantaona. Hatsaran-tarehy. ihany Ny vanim-potoana fizahan-tany dia manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra na dia tsy maintsy tadidinao fa miovaova ny toetrandro arakaraka ny faritry ny firenena. Avy ny orana manomboka amin'ny Jolay ka hatramin'ny Aogositra, Eny tokoa.
Fotoana tsara handehanana any Mongolia amin'ny tapaky ny volana Jolay. Betsaka ny olona nefa mendrika izany satria rehefa ny Fetim-pirenena Naadam izay horesahintsika avy eo. Farany, mila visa ve ianao? Ny firenena sasany tsy manao, nefa tsy izy no maro an'isa. ihany amina masoivoho sy consulat ny visa Ary raha tsy misy ny iray amin'ny firenenao dia azonao atao ny mangataka iray amin'ny firenena mifanila aminao izay manana izany na mahazo azy rehefa tonga ianao, saingy sarotra amin'ny fiteny izany.
Ny visa mpizahatany dia 30 andro ary raha vantany vao azonao izany, dia mitombina ny fampiasana azy ao anatin'ny telo volana ho avy. Ao anatin'ireo fomba fiasa dia mangataka taratasy fanasana izy ireo, ka raha mitsangatsangana voalamina ianao dia manontany ny maso ivoho. Hatramin'ny faran'ny taona 2015 dia tsy nahazo visa ny firenena sasany fa ny hampiroborobo ny fizahan-tany (Espana no tao anatin'io lisitra io), saingy heverina fa efa nifarana ny fampiroboroboana dia manamafy alohan'ny dia.
Inona no ho hita any Mongolia
Raha mijery an'i Mongolia amin'ny sari-tany isika dia afaka mizara azy amin'ny faritra samihafa arak'ireo teboka kardinaly. Ny renivohitra dia ao amin'ny faritra afovoany ary azo antoka fa ho vavahadinao izany ary ity misy lisitr'ireo inona no ho hita any Ulaanbaatar:
Kianja Sukhbaatar. Io no kianja lehibe ary misy ny sarin'ity lehilahy ity eo afovoany, tia tanindrazana tena malaza. Manodidina azy ny Ballet sy Opera Theatre, ny Cultural Culture and the Parliament, ohatra.
Monasiteran'i Ganda. Efa teo amin'ny toerany no nanomboka ny 1838 fa talohan'ny nifindrany teto afovoan-drenivohitra. Izy io dia nitombo be nanomboka tamin'izay ary ankehitriny dia moanina moanina bodista 5 40 no ao. Ny Buddhism dia nijaly teo ambanin'ny Kominisma ary simba ny tempoly dimy an'ny monasiterera resahina. Tamin'ny fianjeran'ny Firaisana Sovietika dia nilamina ny zava-drehetra, naverina tamin'ny laoniny ny monastera ary ankehitriny dia manana fiainana be dia be izy io. Izy io dia manana Buddha avo XNUMX metatra.
Tranombakoky ny Tantara Nacional. Io no tsara indrindra handemana ny tantaran'ny firenena hatramin'ny vanim-potoana vato hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
National Museum of Natural History. Mitovy, fa ny fahalalana lalina ny zavamaniry, ny biby ary ny jeografia an'ity tany lavitra ity. Ny taolana dinôzôro dia tsy tsy ampy,
Tranombakoky ny lapan'i Bogd Khan. Soa ihany fa tsy nandrava azy ny Sovietika tamin'ny fanadiovana manimba izay notarihin'izy ireo tamin'ny 30. Ity no lapan'ny ririnina tao Bogd Khan ary tranombakoka ankehitriny. Ny trano dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary i Bogd Khan no mpanjaka farany sy Buddha velona. Misy tempoly tsara tarehy enina ao amin'ny zaridainany.
Raha fintinina, ity no atolotry ny tanàna, fa eny amin'ny faritra lavitra dia azonao atao ny mahafantatra amin'ireo toeran-kafa manaraka ireto:
Valan-javaboary Mountain Mountain Bogd Khan. Any atsimon'ny renivohitra izy io ary kompana be tendrombohitra misy sary an-johy sy karazana zavamaniry sy karazam-biby. Ao anatiny misy monasiteran'ny taonjato faha-20 misy tempoly manodidina ny XNUMX sy fahitana mahafinaritra ny lohasaha.
Valan-javaboary Gorkhi-Terelj. 80 kilometatra miala ny tanàna izy io ary manome fizahan-tany be dia be toy ny fitsangantsangana, mitaingina soavaly, bisikileta an-tendrombohitra sy maro hafa. Lohasaha mahafinaritra izy io, misy vatolampy miendrika endrika hafahafa, tampon-kazo rakotra kesika ary ala maitso rakotra voninkazo dia.
Valan-javaboahary Gun Galuut. Ny toerana tsara indrindra raha tianao biby, farihy, tendrombohitra, renirano ary honina mihitsy aza. Ny zava-drehetra ao amin'ny famandrihana iray ihany.
Fiarovana voajanahary Khustai. 95 kilometatra miala ny renivohitra izy ary soavaly farany dia erak'izao tontolo izao no monina ao. Fantatra amin'ny anaran'ny soavaly Przewalski izy ireo, taorian'ny mpikaroka Poloney nahita azy ireo tamin'ny 1878, ary rehefa maty izy ireo dia karazany arovana avokoa ankehitriny.
Amin'ity lahatsoratra voalohany momba an'i Mongolia ity dia mifantoka amin'ny fanomezana anao vaovao momba ny firenena izahay, ny fomba ahatongavana any, ny zavatra tokony hidiranao ary ny toerana fizahan-tany indrindra eto an-drenivohitra sy ny manodidina azy. Saingy araka ny efa nolazainay, goavana i Mongolia ka hiara-mahita hatrany azy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Mongolia, fizahan-tany vahiny
Salama Mariela, manao ahoana ianao? Voalohany indrindra, misaotra amin'ny fanamarihana sy ny angona avoakanao. Mikasa ny hanao ny trans-cyberian avy any Russia mankany Beijing (Moskoa marina) aho amin'ny taona ho avy ary te hijanona andro vitsivitsy any Mongolia aho. Fa ny mahaliana ahy any Mongolia dia ny fizahan-tany any ambanivohitra, lavitra ny tanàna. Manana fampahalalana hafa momba izany ve ianao? Toy ny fahaizana mitoby amin'ireo lay malaza, na zavatra toa izany.
Misaotra mialoha amin'ny fanampianao. Efa nosoratako ny daty mety hivezivezena sy ny taratasy fanolorana hahafahana miditra, angon-drakitra manan-danja.
Fiarahabana avy any Arzantina.
Izay ho hita sy hitsidika ny tanànan'i Dublin